China Siri ike na ogologo achara ihe mgbidi facade panel rụpụta na ụlọ ọrụ | Achara ọlaedo
Achara bụ ezigbo ihe na-adịgide adịgide maka mkpuchi façade. Ogwe osisi achara achara dị mma ma nwee ọmarịcha anya. Rebo® achara mgbidi cladding panel emeela ọkụ retardant Class C, nke pụtara na bọọdụ ahụ adịghị mfe ịnweta ọkụ. Enwere ọtụtụ elele dị na ngwungwu achara:
A na-ejikarị osisi bamboo arụ ụlọ na n'ime ụlọ, ma kewaa n'ime achara n'ime ụlọ na achara n'èzí dịka ọnọdụ ya dị na mbụ. Dị ka ọnọdụ ya si dị, a na-ejikarị ya eme ihe maka mgbidi mgbidi, ala na ụlọ elu kwụsịtụrụ. Isi ọkpụrụkpụ nke mgbidi bụ 12mm na 18mm. Nnukwu mgbidi mgbidi bamboo bụ ngwaahịa emere site na ọgwụgwọ pụrụ iche pụrụ iche na ndabere nke bọọdụ achara a na-atụ n'èzí.
Achara mgbidi cladding bụ agbatị ngwaahịa sitere na eriri achara, nke nwere njirimara zuru oke nke ya, nke ahụ bụ njupụta dị elu, ike siri ike, ike siri ike, obere emepụta formaldehyde (E1 European standard). Achara mgbidi panel nwere obere nkụ na nsị ọzịza, ọ dịghị mfe nrụrụ, mgbochi corrosion, waterproof na ihu igwe na-eguzogide. O nwere nkwụsi ike siri ike, ma gafere ule iri nri 72. A na-eji ya eme ihe na mgbidi mma nke obodo, ụlọ nkwari akụ na klọb. Nnukwu mgbidi mgbidi achara na-ewu ewu nke ọma na ogige ogige ndị ọbịa, maka ọdịmma nke gburugburu ebe obibi, njirimara ahụike.
1) Eke na ọdịdị mara mma
2) Dịgidere, na-akwụsi ike ma sie ike
3) Fire na-eguzogide ọgwụ (Klas B)
4) Very ogologo na-adịgide adịgide
Nke gara aga: Ike na njupụta carbonized achara n'èzí flooring
Achara Ihu facade Panel
Ike na njupụta carbonized achara n'èzí FL ...
Hot mgbali ezi mma n'èzí arọ achara ...
E1 Eurpean ọkọlọtọ eco-enyi na enyi achara floorin ...
Ọchịchịrị agba enweghị deformation achara decking osisi